अनलाईन भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी ’खल्ती’ डिजिटल वालेटले ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बीमा प्रिमियम ’खल्ती’ बाट तिर्दा प्रयोगकर्ताहरूले रू. १००० सम्मको क्यास ब्याक पाइने अफर ल्याएको छ।
साथै ५००० सम्मको खल्ती पोइन्ट र पहिलो भुक्तानीमा प्रोमोकोड प्रयोग गरी रू. १०० को क्यास ब्याक पनि प्राप्त गर्नेछन्।
कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा डिजिटल भुक्तानीले अर्थव्यवस्थालाई सहज बनाएको र प्रयोगकर्ताहरूलाई भाइरसको सम्पर्कबाट बच्न मद्दत गरेको छ। तसर्थ, लामो लाइनमा नबसी सुरक्षित रूपमा भुक्तानी गर्न सहज गर्ने डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रोत्साहित गर्न यो अफर शुरू गरिएको हो।
यस सुविधा बारेमा बोल्दै खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय खड्काले भने, “प्रविधि र विकासको परिवर्तनसँगै, डिजिटाइजेसनको आवश्यकता द्रुत रूपमा बढिरहेको छ। धेरै बीमा ग्राहकहरूले डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत आफ्नो प्रिमियम तिर्न रुचाउँछन्। डिजिटल कारोबारलाई अझ प्रोत्साहित गर्न तथा सबै प्रकारको भुक्तानी सहजै तिर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यो अफर ल्याइएको हो।”
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नवीकरण बीमा शुल्क 'खल्ती' बाट यस प्रकार तिर्न सकिन्छ :
’खल्ती’ एप लग–इन गरि “इन्स्योरेन्स” आइकन मा ट्याप गर्ने
'DOB' र 'Policy Number' भर्नुहोस् र विवरणहरू प्राप्त गर्न ट्याप गर्नुहोस्
रु. ५००० माथिको नवीकरण बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नुपरेमा ग्राहकले आफ्नो ’खल्ती’ केवाइसी भने अनिवार्य रुपमा भेरिफाई गराएको हुनुपर्नेछ। खल्ती खाता नभएको खण्डमा साइन अप गरि वा नेपालभरी फैलिएको खल्तीको कुनै पनि खल्ती सेवा केन्द्रबाट पनि भुक्तानी गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ।
धितोपत्र बोर्डले गर्‍यो कर्मचारीहरू सिफारिस [नामावलीसहित]
धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न पदमा कर्मचारीहरू सिफारिश गरेको छ । बोर्डले लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताबाट छानिएकाहरूलाई पदपूर्तिका लागि सिफारिश गरेको हो । सूचना...
शनिवार नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको खरिद दर १ सय २३ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्री दर १ सय २४ रुपैयाँ ३८ पैसा कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिवारका लागि तय गरेको विदेशी मुद्रा सटही दरअनुसार युर...
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र सुर्खेत स्थित सुर्खेत हस्पिटल प्रा.लि. बीच सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारी पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरुले सुर्खेत ह...